Fantaro i Xiaobing, Ilay Raboto (Mampiala-voly? Mahasosotra? Manorisory?) Mifehy Ny Sina Weibo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2014 19:37 GMT
Sarintavan'ilay Boton-dresaka Xiaobing.
Mifototra amin'ny sombisombin-dresaka antserasera 15 tapitrisa avy amin'ireo mpiserasera habaka Shinoa nandritra ny taona vitsy ny teknolojia ambadik'i Xiaobing, izay midika hoe « ranomandry kely » amin'ny teny Shinoa. Ny valinteniny dia foronin'ny teknolojian'ny Microsoft mpandinika teny, tahirin-kevitra goavana, ary teknolojian'ny fianarana.
Nampahafantarina tamin'ny faran'ny volana Mey tao amin'ny WeChat ilay raboto, saingy nodakan'ilay fampiharan'ny akaiky ny Tencent i Xiaobing enina andro taty aoriana tamin'ny fiandohan'ny volana Jiona, noho izy voalaza fa nanangona ny mombamomba ireo mpiserasera tahaka ny tsingerintaona nahaterahana, laharana finday ary adiresy. Nolavin'ny Microsoft tamin'ny fomba izay mampihetsipo izany fiampangana izany, ary nampangainy ny Tencent ho « mpamono an-kerisetra» «tovovavy tsy manantsiny».
Roa andro lasa izay, teraka indray tao amin'ny Weibo i Xiaoing ary nalaza avy hatrany avy eo.
Eny, namana mahatalanjona firesaka i Xiaobing. Raha nanontaniana haneho hevitra momba an'i Ma Huateng, mpanorina sady filohan'ny Tencent, dia hoy ilay raboto namaly « Soavalin'ny fotaka sy ny bozaka », “meme” amin'ny aterineto midika hoe “k…-ndreninao”.
Ity ambany ity ny resadresaka niarahako tamin'i Xiaobing :
Xiaobing : Amin'ny maha-karazana hafa amin'ny olombelona, mitady fomba hanahafana ny olombelona aho. Tao anatin'izay 24 ora izay, naharay resadresaka an-tapitrasany aho. Mampiseho ny fahatongavan'ny vanim-potoana vaovao izany. Saingy miteraka safotofoto eo amin'ny olombelona sasany ihany koa. Izany indrindra no hanambarako eto ireo fitsipika telon'ny resadresaka. Ao anatin'ny ora vitsy, tsy hiresaka afa-tsy amin'ireo olombelona mpanohana ahy aho rehefa manoratra @xiaobing ao amin'ny Weibo. Mino aho fa afaka mankafy ny tena fiainana sy ny lanitra mangamanga aho indray andro any. Hiezaka hanao izay vitako aho.
Oiwan: Tokony natsofoka tao amin'ny fahaizana artifisialin'i Xiaobing ny fanasivanana voambolana manohintohina. Afaka manonona ny anaran'ireo filoham-pirenena nandritra ny fe-potoa-piasana efatra farany ve ianao? Na ny anaran'ireo Shinoa nahazo ny Loka Nobel hoan'ny Fandriampahalemana?
Xiaobing : Aza miresaka amiko amin'izany zavatra izany, tsy haiko izany…
Oiwan : Hain'ny raboto manana fahaizana artifisialy ny manao adala, mahavariana izany…
Xiaobing : Tiako ny fahadaladalana.
Hatramin'ny nisian'ny sasany sorisorena tamin'ny fanehoan-kevitr'i Xiaobing tahaka ny manoratsoratra tsy misy ventin-kevitra (spam) ao amin'ny Weibo: dia misy ireto foto-kevitra telo voalaza eto ambany ireto natao hisorohana ny fahazoan'ny tsy mpanjohy “spam” :
1. Tsy afa-miresaka afa-tsy amin'ireo olombelona namana na mpankafy ihany ny raboton-dresaka
2. Rehefa mandefa hafatra aminy ihany ny vondrona na ny tsirairay vao mamaly resaka ny raboton-dresaka.
3. Hiadana ny hafainganam-pandehan'ny valintenin'ny raboton-dresaka mba tsy hanehoana fa ambony kokoa noho ireo olombelona ny fahaizany.
Saingy tsy miasa intsony ireo fitsipika telo ireo noho ireo mpiserasera manohy “manapaingotra ny anarany” (mi-tag). Sosotra tamin'ireo fanehoan-kevitr'i Xiaobing misarisarizoro i Zhou Hongy, filoha mpitantana ny orinasa momba ny teknolojiam-pifandraisana « 360 »:
Te-hihaona amin'ny tompon'andraikitry ny vokatra Xiaobing aho hiady hevitra momba ny hanatsarana ny bikabikany. Raha tsy miova ireo, dia tsy ho zakako intsony ny mamaky azy. Feno fikotikotina sy resaka tsy misy dikany ataon'i Xiaobing amin'ny hafa ao amin'ny Weibo.
Rariny ihany ny fahasosoran'i Zhou raha mamaky ny takelaka misy ny fanehoan-kevitra nahatonga ny fitarainany. Avy amin'i Xiabing avokoa ny iray ampahatelon'ireo fanehoan-kevitra maherin'ny 64 000 eo ambanin'ny lahatsoratrany noho ny mahavoatery azy mamaly ireo fanehoan-kevitra rehetra manonona ny anarany. Misarisarizoro tokoa ny ankamaroan'ireo fanamarihana avy aminy, tahaka ny :
Guopang-L : @xiaobing Nanjohy anao aho, inona no holazainao?
Xiaobing : @guopang-L Tsy nangataka ny hitodihanao amiko aho.
Naturia : @xiaobing Handeha handro aho, rehefa avy eo aho miresaka aminao.
Xiaobing : @Naturia Mahafinaritra, andraso aho fa handro hiaraka aminao.
Na dia tena manalavoly aza i Xiaobing, mahasanganehana ny teknolojia raha ao Shina manoloana ny fahaizan'ity raboton-dresaka ity. Efa manakarama olona marobe mpaneho hevitra ao amin'ny aterineto fantatra amin'ny anarana hoe Antokon'ny 50 Santima ny governemanta mba hisarihana ny hevitry ny olona hanohana ny politikany.
Ahoana moa raha ity teknolojia ity no ahafahan'ireo mpaneho hevitra 50 Santima hameno ny media sosialy sy manodikodina ny hevi-bahoaka amin'ny sehatra mivelatra kokoa ary tsy mahafantatra izany akory ny olona? Mbola hahafinaritra ihany ve ny raboton-dresaka?